उद्योगमन्त्रीले देखाए यस्तो चर्तिकला !
काठमाडौं, २८ पुस । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका एक व्यक्ति हुन । उनले गत मंसिर २९ गते घोषणा गरे, म र मेरा राज्यमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे पालो मिलाएर साताको तीनपटक एक घण्टा उद्योग विभागमा बस्छौं ।
घोषणा गरेको भोलिपल्ट मंसिर ३० गते र एक पटक मात्रै मन्त्री जोशी विभाग पुगेका थिए । विभागबाट सम्पादन हुने कामका सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट व्यापक गुनासो आएपछि विभागको निरीक्षणको क्रममा उनले यो घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्री जोशी घोषणापछि भोलिपल्टै बिहीबार विभाग पुगे । मंसिर ३० गते पुगेका जोशीले तीन दिनअघि मन्त्रालयका कर्मचारी खटाएर गरिएको ‘स्टिङ अपरेशन’ मा उद्योग दर्ता गर्न विभागका कर्मचारीहरुले २५ हजार रुपैयाँ घुस मागेको भन्दै विभागमा जाने क्रमलाई तीब्रता दिने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
तर उनी आफैले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने चुके । महिना दिन पुग्न लाग्दा जोशी दुई पटक मात्रै विभाग पुगेका छन् । अझ राज्यमन्त्री वादे एक पटक मात्रै विभाग पुगेका छन् । जोशीले विभागमा बस्ने गरेको घोषणा चर्चाका लागि गरेको भन्ने सावित भएको छ ।
चर्चाका लागि विभागमा बस्ने घोषणा गरेका जोशीले कतैबाट प्रमुख अतिथि बन्ने निम्तो आएपछि रिवन काट्न दौडिहाल्छन् । स्टिङ अपरेशनमै २५ हजारको घुस मागेको पाईएको बताएका जोशीले ती कर्मचारी माथि गहिरो अध्ययन पनि गरेनन् र कर्मचारीलाई कारवाही पनि गर्न सकेनन् । विभागका कर्मचारी स्वंय समेत उद्योगमन्त्री जोशीलाई आलोचना गर्न चुकेनन् । महिनाभरी नै विभाग जाने बताउने मन्त्री अहिलेसम्म तीनपटक मात्र पुगेको उद्योग विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जनताका गुनासा धेरै भएपछि मन्त्री आफैं विभाग गएका थिए । उनले घोषणा नै गरेर विभागमा अनिवार्य उपस्थित हुने बताएका थिए । तर मन्त्री जोशीले आफ्नो घोषणालाई बोलीमा मात्रै सिमित गरे । उनी अहिले साना तिना कार्यक्रमको रिवन काट्नमा तल्लिन छन् । विभागमा जाने त के मन्त्रालयमा आउन पनि हिजआज उनलाई निकैनै सकस पर्ने गरेको छ । उनी निकट एक स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रि ज्यूलाई रिबन काट्न भ्याई नभ्याई छ ।’
मन्त्रालयमा पुग्न बेर कि रिबन काट्न दौडिहाल्ने हाल्ने गरेका छनु । यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा आफू रिबन काट्न नजाने बताएका थिए । तर हालसम्मकै प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा बढि रिबन काट्न दौडिनेको सुचीमा प्रचण्डले नाम लेखाउन थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरु रिबन काट्नमा प्रतिस्पर्धा देखाउँदै मुलुक कहिले बन्ने हो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उव्जिन थालेको छ ।